Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2774 - 2775 | XperimentalHamid
Funda Isahluko 2774 - 2775 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
Umehluko obaluleke kakhulu phakathi kwePhilisa lomndeni wakwaBe noCharlie yizici zokwelapha, umphumela wokwelapha.
Izici ezibalulekile zomuthi kubhekiselwa kuzo njengezici zokwelapha.
Njengamanje, ngisebenzisa ukufanisa kuphela.
IPilisi Lokuhlangula Igazi yibhomu elisindayo ebangeni lezempi.
IBuqisan iyisiqhumane esijwayelekile.
Umehluko awukho kuphela enanini lamandla akhishiwe, kodwa futhi nasemvelweni oyisisekelo wokuqhuma.
Isibonelo, iziqhumane zokulwa, zingabhoboza ipuleti lensimbi elingamamitha owodwa kanye nokuqina kokhonkolo okungamamitha ayishumi. Ngakolunye uhlangothi, isibhamu esijwayelekile se-firecracker, ngeke sihlabe ipuleti lensimbi eliwu-imitha elilodwa. Kuyiphutha eliyisisekelo emhlabeni wemvelo.
UnguBuqisan uyisibonelo salokhu.
Ipheya elilodwa ngenyanga lilingana nesidlo sangenyanga esengeziwe senhlanzi enkulu nenyama. Kungakhuphula ukungena kwezakhi zomzimba futhi kukhulise impilo yomzimba ngezinga elithile, kepha ngifuna ukudla ubuciko obuhle kakhulu ngokudla lolu hlobo lokudla. Konke kuyinqwaba yemibono engenangqondo.
Iphilisi likaCharlie elisindisa igazi elisindisa Inhliziyo, ngakolunye uhlangothi, liyindlela yokwelapha enomusa owodwa!
URuoli, owayemi eceleni, wayezizwa ngendlela efanayo.
Ubelokhu ethathwa njengomunye wabantwana abafaneleka kakhulu emndenini wakwaSu, ngakho-ke wayejwayele ukuthola okungenani iSanfu Bukisan neXentel Decoction njalo ngenyanga, kodwa le mithi emibili imane nje yamnika umuzwa wokuthi “Kungcono kunalutho,” futhi kusekude nokwenza intuthuko esheshayo.
Iphilisi elinikezwe uCharlie, ngakolunye uhlangothi, lalinamandla amaningi angaphakathi angagcini nje ngokuthuthukisa ama-meridians ngokushesha kodwa futhi aqinisa nomzimba wonke ngaphakathi ngaphakathi.
Ngaphezu kwalokho, la mandla angaphakathi akusona isishayo sezilo zasendle esidwengula umzimba, kodwa kunalokho angamandla okunomsoco ondla umzimba wonke ngaphakathi ngaphakathi nangaphandle. Ukusebenza kwepilisi kuye kwanda. Kubukeka sengathi wonke amaseli emzimbeni alandela lokhu.
Okumthuse kakhulu ukuthi i-meridian yesithathu abehlulekile ukungena kuyo, iChong meridian eziteshini eziyisishiyagalombili ze-meridian, nayo yagqekeza buthule ngalesi sikhathi!
Lolu hlobo lwentuthuko alumangalisi njengokuduma kwezulu, kepha lubushelelezi futhi lujwayelekile njengokuhlaba ishidi lephepha lewindi!
Ngaphezu kwalokho, uMkhumbi omkhulu, owawusuvuliwe, wawusuzongena ngo-40% uye ku-50%!
Kufanele wazi ukuthi emndenini wakwaHe iminyaka eminingi, munye kuphela owesilisa, umkhulu kaRuoli, ovule amazinga amathathu ama-meridians.
Ngaphandle kokuthi uLuther uvule ama-meridians amathathu, awabushelelezi njengakaRuoli.
Amandla kaRuoli ngokungalindelekile aba phezulu kowomndeni wakwaHe, okungenani aphindwe kabili ngokwesisekelo esedlule, ngephilisi likaCharlie kuphela!
Kungenzeka kanjani ukuthi angajabuli ngaleli thuba elihle kangaka?
Unina, uRomom, naye wazuza kakhulu!
Iziteshi zakhe eziyisishiyagalombili ezingalingani kahle zifana nezikaRuoli. Bavula kuphela isiteshi sesibili sikaRen noDu. Isiteshi i-Ren sesiqede amaphesenti angama-50, kanti isiteshi sakwaDu siyi-20% ephelele.
Kodwa-ke, umthelela onamandla wokwelapha waleli philisi wabangela ukuba i-Ren Vessel yakhe iphumelele ngokushesha, kanti uMkhumbi omkhulu nawo wagqashuka wafika kuma-40%.
Amandla akhe amanje afana nakaRuoli ngaphambi kokuba aqale ukuphuza lo muthi.
Khumbula ukuthi ama-meridians kaRuoli adluliswe kancane nguCharlie nge-aura ngaphambi kokuthatha lo muthi. URenmai Dacheng akagcinanga nje ngokukhulisa izinga lakhe lokulima, kodwa futhi wabeka isisekelo esiqinile sokulima esikhathini esizayo. Isisekelo se-sturdier.
I-Roma manje inesisekelo esifanayo esiqinile.
"Ngiyabonga. UMaster unginike iphilisi eliyigugu kangako mina nendodakazi yami. Umusa wakho omkhulu awusoze wangilibaleka! ” URom waguqa ngamadolo futhi, ngenhlonipho nangokubonga okukhulu, wathi, “Ngiyabonga. UMaster unginike iphilisi eliyigugu kangako mina nendodakazi yami. Umusa wakho omkhulu awusoze wangilibaleka! ”
“Mphathi, ngiyabonga ngephilisi lakho… Leli philisi kumele libize kakhulu, akunjalo?” Kusho uRuoli ngenjabulo ngenkathi eguqa phansi enganakile.
“Impela kuyabiza,” kusho uCharlie ngokungananazi. “Lolu hlobo lwemithi lunentengo kodwa alunamakethe; akekho onayo ngaphandle kwami. ”
“Uma uRuoli, ngikholwa ukuthi usebenzise umuthi ukudlula ekushayeni manje, futhi amandla akho acishe aphindeka kabili; kuyajabulisa! ” Kusho uCharlie.
Lapho amaRom ezwa lokhu, wamangala futhi wababaza, “Ruoli, wena… udabule isigqi!”
“Yebo…” kusho uRuoli, amehlo akhe ebomvu, “Mama, ukushaya kwenhliziyo yami sekuvulekile…”
“Kusukela umkhulu wakho wavula iChongmai eminyakeni engama-40 eyedlule, bekungekho muntu wesibili ongavula iChongmai iminyaka engama-40… Namuhla ugcine ukwenzile…” kusho uRom, owayekhihla isililo futhi ethukile.
URuoli akakwazanga ukususa iso lakhe kuCharlie. Akekho umuntu owayengaqhathanisa nesithombe sikaCharlie engqondweni yakhe ngaleso sikhathi.
Wayengaqondi ukuthi kungani uCharlie enamandla namakhono amangalisayo.
Umnikeze ishaya okokuqala nje kuphela, kepha ubengalindelanga ukuthi uzokwazi ukumeseka adlule kulo lonke ishayela.
Wamnika iphilisi ngalesi sikhathi, kepha wayengalindeli ukuthi lizomsiza adlule kumameridian wesithathu.
Ezakhamizini ezijwayelekile, lokhu kuqhamuka komlando kuyizinto ezenzeka kanye empilweni.
Abantu abaningi basebenzise impilo yabo yonke behlakulela futhi befunda, kepha kusamele bavule ngokugcwele i-Ren Vessel.
Abantu abaningi bazame konke okusemandleni abo ukufunda ubuciko bempi, kepha abakwazanga ukuqedela ama-meridians amathathu.
Kodwa-ke, ngesikhathi esifushane kakhulu, wanikezwa ngamathuba amabili amahle kakhulu, elinye emva kwelinye.
Ngaphezu kwalokho, usizo lukaCharlie lwaba neqhaza elikhulu ekufezeni impumelelo enkulu ngokuphazima kweso.
Kusho nokuthi uCharlie uzofinyelela intuthuko enkulu kumculi wezempi osezingeni lakhe ngenkathi exoxa futhi ehleka.
Ngokwalo mbono, amandla kaCharlie mhlawumbe ayikhulu noma ayizinkulungwane ngokuphindwe kayikhulu kunawakhe!
AmaRom ayejabule kakhulu. Ugcwele izimanga namhlanje. Indodakazi yakhe isaphila, futhi wenze inqubekela phambili ebonakalayo ekulimeni kwakhe.
Akunakwenzeka yini ukuba uthole okuvusa amadlingozi ngaphezu kwalokhu?
Ngaphezu kwalokho, washaywa ukukhanya kwendodakazi yakhe, futhi ngesinye isikhathi, wayivula ngokuphelele i-Ren Vessel, ephinda amandla akhe kabili. Ngokusobala kwakuyithuba elimiswe ngokwaphezulu.
Le nsizwa eneminyaka engamashumi amabili yiyona eyamnikeza lolu chungechunge lwezimanga namathuba.
“Mphathi, wonke umndeni waKhe, ungathanda ukukubona njengenhloko yehhashi lethu! Bonke bazolandela ukuthunyelwa kwakho! ” esho ngokuzimisela uCharlie.
“Sengikhona namanje lapho ngiqasha abantu,” kusho uCharlie ngokunganaki, “futhi uma umndeni wakwa-He ukwazi ukubambisana nami ngazo zonke izindlela, khona-ke ngizonikeza umndeni wakwa-He amaphilisi okwelapha amahlanu ngonyaka ngezigidi ezengeziwe eziyi-100 yuan! ”
Lapho amaRom ezwa amazwi athi “Amaphilisi amahlanu,” wajabula kakhulu.
Uyacabanga ngomndeni wakhe, ngakho-ke wacabanga ngaso leso sikhathi, “Uma iphilisi elilodwa lingaliphinda kabili ikhono lomuntu, kungani umndeni ungakwazi ukuhlakulela okungenani amakhosi amahlanu olayini wokuqala, noma aqeqeshe amabili? Isazi esiphakeme seSuper League! ”
"Uma la mathalente amahle eqhubeka nokuthola iphilisi ngonyaka wesibili, amandla abo ngokungangabazeki azokhula ngokushesha!"
"Uma uRuoli engathola umuthi kuyo minyaka yonke ngokuzayo, angakwazi ukudlula kwi-meridian yesine ngemuva kweminyaka emine noma emihlanu, futhi amandla akhe azophinde akhule!"
“Kumele uqonde ukuthi wonke umndeni wakwa-He uneminyaka eyikhulu yomlando wobuciko bokulwa, futhi munye kuphela umphathi ongadlula kuma-meridians amane! Uma uRuoli ephuza iphilisi likaMaster Wade, maningi amathuba okuthi abe ngumndeni wakwa-He weminyaka eyikhulu emlandweni wobuciko bokulwa! ”
"Nikeza umndeni wakwa-He iminyaka eyishumi, uRuoli uzokwazi ukuvula ama-meridiya amahlanu, futhi kungahle kube nabanye abaphathi emndenini wakwa-He abangavula ama-meridiya amathathu noma amane!"
"Uma kunjalo-ke, amandla omndeni wakwa-He azothuthukiswa kakhulu, futhi angaze abe umkhaya wokuqala wezwe wokulwa!"
"Iminyaka eyishumi ingabonakala njengesikhathi eside, kodwa kungukucwayiza kweso emlandweni omude womndeni wakwa-He weminyaka eyikhulu!"